By NyaungbinApril 22, 2015No comments
ရေရှည်ပညာသင်ကြားနိုင်ရန်အတွက် ဦးဝိမလ (ဓမ္မာစရိယ) မိုးကုတ်နယ်လှည့်ဓမ္မကထိက
မှ ပညာရေးအထောက်အကူပြု ပင်မငွေပဒေသာပင်အလှူတော်ငွေ (၅၀၀၀၀၀) ငါးသိန်းကျပ်ကို ဒု နာယက ကျောင်းအုပ်ဆရာတော်အထံဆက်ကပ်လှူဒါန်းပါသည်၊
By မိန်နွေ( ငါန်းဇွန်)March 30, 2014၀တ္ထုတိုNo comments
By UnknownSeptember 29, 2013facebook, နည်းပညာNo comments
Android ဖုန်းပေါ်ကနေ Gmail Account အလွယ်တကူဖွင့်လို့ရပါပြီ
By UnknownSeptember 29, 2013G-mail ဆိုင်ရာ, နည်းပညာNo comments
websites blogger တွေအတွက် ကောင်းနိုးရာရာ ကုတ်လေးများ
By UnknownSeptember 19, 2013နည်းပညာNo comments
လိုအပ်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် websites တွေအတွက် ကောင်းနိုးရာရာ html ကုတ်လေးများ.......
By UnknownSeptember 18, 2013facebook, နည်းပညာNo comments
Facebook မှာ Password မေ့သွားလို့ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမယ်လဲ......? facebook မှာ lock ဖြစ်သွားတဲ့ အကောင့် တွေလည်းအများကြီးပါ။တကယ်တော့ တင်းကျပ်လာတဲ့facebook ရဲ့ pivicay တွေကိုမသိလို့ ခဏတာလော့ ကျသွားတဲ့ အကောင့် တွေကိုဒီနည်းနဲ့ ပြန်ပြီးယူလို့ ရပါတယ်။password ပြန်ပြီအသစ်
စ်ပြောင်းချင်သူများလည်းဒီမှာလိုက်လုပ်ကြည့် ပါ။တစ်ချို့ လော့ကျတဲ့facebook အကောင့် တွေကိုမဖွင့် ပဲ တစ်ပါတ်လောက်ပစ်ထားပြီးဒီနည်းအတိုင်းလိုက်လုပ်ကြည့် လိုက်ပါ။အဆင်ပြေပါတယ်။ဒါဆိုရင်လတ်တလောအပူတွေဖြစ်နေတဲ
့သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်းအကောင်းဆုံးကူညီပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်။
ငါန်းဇွန်မြို့( စေတနာမွန်) လူမှုကူညီရေးအသင်း
By UnknownSeptember 13, 2013ငါန်းဇွန်မြို့နှင့်ပက်သက်သမျှNo comments
ငါန်းဇွန်မြို့ (စေတနာမွန်) လူမှုကူညီရေး အသင်း (အခမဲ့) အ ရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်
(5,9,2013)မှ စတင် အကျိုးဆောင် ဆက်သွယ် ရန်ဖုန်းနံပါတ်များမှာ ----
အတူပါဝင် ကုသိုလ်ပြုနိုင်ကြောင်းးးးးးး)်
FB ကနေ အားပေးဖို့ like ပေးပါ
ဗုဒ္ဓစာပန်းချီ (ပထမတွဲ) - ငွေဥဒေါင်း ဗုဒ္ဓစာပန်းချီ ...
၂၁ ရာစုအင်္ဂ၀ိဇ္ဖာဆောင်းပါးများ _ ဦးမောင်မောင်သန်း ၃၇ မင်း _ ဦးဖိုးကျား ၁၉၃၀တ၀ိုက်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်း _ သိန်းဖေမြင့် (က) ကထာဝတ္ထ...
ဘ၀နှင့်ရင်းနှီးခဲ့ရသော သင်္ခန်းစာ ( လူတိုင်းဖတ်သင့်တဲ့ ၀တ္ထုတို )
မိုးကဆွေနေသည်မှာ ငါးရက်ပင်ရှိနေချေပြီ။ တောတောင်များ ထူထပ်၍လော၊ ပင်လယ်နှင့်နီးသောကြောင့်လေမသိ။ ယခုချိန်ထိ မိုး...
မိန်နွေ (ငါန်းဇွန်). Powered by Blogger.
ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးညောင်ပင်ကျောင်းတိုက် ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများ ရေရှည်ပညာသင်ကြားနိုင်ရန်အတွက် ဦးဝိမလ (ဓမ္မာစရိယ) မိုးကုတ်နယ်လှည်...
Arsip Blog Apr 22 (1) Mar 30 (1) Sep 29 (2) Sep 19 (1) Sep 18 (1) Sep 13 (1) Sep 02 (1) Aug 28 (1) Aug 26 (1) Aug 23 (4) Aug 22 (4) Aug 21 (1) Aug 20 (2) Aug 03 (2) Jul 22 (2) Jul 16 (3) Jul 08 (3) Jun 14 (4) Jun 09 (6) Mar 28 (1) Mar 27 (6) Mar 26 (1) Mar 03 (1) Feb 26 (1) Feb 17 (1) Feb 15 (1) Feb 06 (3) Jan 31 (3) Jan 28 (1) Jan 27 (2) Jan 22 (11) Jan 21 (3) Jan 20 (1) Jan 18 (1) Aug 05 (1)
*** ဗုဒ္ဓေါ မေ သရဏံ အညံ နတ္ထိ ***
BUDDHA FM ONLINE RADIO
အသစ်တင်တိုင်း E-mail မှဖတ်ရန်
သင့် E-mailထားခဲ့တာနဲ့ တင်သမျှ
ပုံကိုနှိပ်၍ Download ရယူပါ
( ဆရာတက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် )
Copyright © မိန်နွေ | Powered by Blogger